Amar Kukreja ၏ဆောင်းပါးများအပေါ် Martech Zone |
ဆောင်းပါး Amar Kukreja
Amar Kukreja သည် Salesforce စစ်ဆေးခြင်းတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်သည်။ သူသည် Apex အပြင်အခြားစမ်းသပ်မှုများကိုလည်းသုံးသည်။ သူသည်ကန ဦး Salesforce တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအပါအဝင်အခြားဆက်စပ် Salesforce ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်းပေးသည်။ ပိုမိုလေ့လာရန် Salesforce Github.
ကြာသပတေးနေ့, ဇန်နဝါရီလ 19, 2017 သောကြာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 20, 2017 Amar Kukreja
Salesforce စစ်ဆေးမှုသည်သင်၏စိတ်ကြိုက်အရောင်းအ ၀ ယ်ပေါင်းစည်းမှုနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးအသုံးချမှုများအားမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ကောင်းမွန်သောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုသည် Salesforce modules များအားလုံးကိုအကောင့်များမှ ဦး ဆောင်ခြင်း၊ အခွင့်အရေးများမှအစီရင်ခံစာများအထိနှင့်လှုပ်ရှားမှုများမှအဆက်အသွယ်များအထိအကျုံးဝင်သည်။ အားလုံးစမ်းသပ်မှုနှင့်အတူဖြစ်သကဲ့သို့, အကောင်းတစ် ဦး (ထိရောက်သောနှင့်အကျိုးရှိစွာ) တစ် ဦး Salesforce စမ်းသပ်မှုလုပ်နေတာနှင့်လမ်းမကောင်းတဲ့လမ်းလည်းမရှိ။ ဒီတော့ Salesforce ကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်ကိုစမ်းသပ်ခြင်းကဘာလဲ? မှန်ကန်သောစမ်းသပ်ခြင်းကိရိယာများကိုသုံးပါ - Salesforce စစ်ဆေးခြင်း